Ngaphezulu kwama-800 avavanyiweyo kunye neepateni ezinemigca | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaphezulu kwe-800 yokujonga kunye neepateni ezinemigca
¿Estás buscando iipateni nge ukupeyinta o imivimbo kwabanyulu isitayile selaphu lepikniki? ;) Ewe, uze endaweni elungileyo! Apha uya kufumana ngaphezulu kweepateni ezingama-800 zokutshekishwa kunye nemivimbo yendlela ezahlukeneyo kwaye zonke ezahlukileyo onokuzikhuphelela kwaye uzisebenzise kuyilo lwakho simahla.
Abafana kwiNaldz Graphics, abasoloko besenza ingqokelela emangalisayo, bayasonwabisa namhlanje ngokudityaniswa okukhulu Ngaphezulu kwama-50 eepakethi zepateni zasimahla zale ndlela.
Ukongeza, ekuqaleni kwenqaku endikushiya likudibanisa apha, unayo Amakhonkco ama-5 ekudityanisweni kweepateni zezinye iindlela: Iipateni ezingama-250 zejiyometri, iipateni ezili-100 zeentyatyambo, iipateni ezingama-40 eziluhlaza zeendlela ezahlukeneyo nokugqibezela ukudityaniswa kweepateni ezimthubi zeendlela ezahlukeneyo.
Ukukhuphela iipateni ezitshekishiwe kunye nemigca kufuneka ufake le khonkco ilandelayo kwaye ucofe kumfanekiso omele ipakethi nganye okanye ipateni okanye kwikhonkco oya kuyifumana phantsi komfanekiso ngamnye ngesihloko esithi "Umthombo wokukhuphela".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iipateni » Ngaphezulu kwe-800 yokujonga kunye neepateni ezinemigca
31 imizekelo yokusebenzisa imibala emnyama kuyilo lwewebhu
IiLogo ezingama-40 ezisebenzisa iSithuba esibi